Massachusetts Institute of Technology (WITH) - Study muna USA
Musakanganwa kuti kurukura Massachusetts Institute of Technology
Kunyoresa pana Massachusetts Institute of Technology
Massachusetts Institute of Technology kwakatangwa voga kuti rakaumbwa 1861.
Muripo mazai ari Massachusetts Institute of Technology ndivo $48,000 (Aprox.).
With iri mu Cambridge, Massachusetts, mhiri Charles River kubva Downtown Boston. freshmen vadzidzi chete vanofanira kugara kembasi, asi vanenge 70 muzana yevadzidzi vanosarudza pamusoro kembasi mumakore mana. With rinopa dzimba mune rimwe coolest dorms munyika, unowanzonzi “The Sponge,” rikagadzirwa akitekiti Steven holl. The with Engineers kuzvirumbidza kupfuura 30 NCAA Division III zvikwata, uye Mascot ravo riri Beaver, iyo with akasarudza pamusana wayo “zvinoshamisa engineering zvokuimba unyanzvi uye ayo tsika indasitiri.” kirasi Mumwe mapurani chindori nemamwe anonzi “Brass Rat” Kunoratidzwa munguva sophomore gore, tsika kuti Mikoko kudzokera 1929.
With chinotarisa kwesainzi uye kwesayenzi uye rakakamurwa zvikoro zvishanu uye imwe koreji. Pakati girajuweta zvikoro ayo ari zvikuru rakava kuna Engineering andSloan School of Management School, kuwedzera zvirongwa simba dzezvoupfumi, wepfungwa, bhayoroji, kemesitiri, pasi sayenzi, Physics uye masvomhu. Research havashandisi mari pana with kunge yemanyorero Vakapfuura $650 miriyoni rimwe gore, pamwe mari achibva hurumende masangano akadai weDhipatimendi Health uye Human Services uye Department of Defense. The “Independent Activities Program,” rwemavhiki mana izwi pakati kuwa yomunakamwe semesters muna January, inopa chaiwo makosi, hurukuro, makwikwi uye zvirongwa. Anokudzwa alumni vanosanganisira Apollo 11 asitironati Buzz Aldrin, aimbova U.N. Munyori General Kofi Annan uye Federal Reserve Bank Chairman Ben Bernanke.
Basa iri Massachusetts Institute of Technology ndiko kufambisira mberi ruzivo uye kudzidzisa vadzidzi zvesayenzi, zvigadzirwa, uye dzimwe nzvimbo bhezari zvichaita zvakanaka kushumira rudzi uye nyika remakore rechi21. Tiri uyewo inopepereswa kuunza ruzivo kutakura matambudziko makuru enyika.
The Institute ndiye yakazvimirira, coeducational, vega akapa yunivhesiti, vakarongwa kuva Schools shanu (akitekicha uye nokuronga; ouinjiniya; nevanhu, Arts, uye sayenzi nemagariro; utariri; uye musayenzi). Rine zvimwe 1,000 fakaroti nhengo, kupfuurisa 11,000 Rokutenderwa uye akapedza kudzidza vadzidzi, uye kupfuura 130,000 zvipenyu alumni.
Panguva pakuvambwa kwayo 1861, With aiva utsanzi dzidzo, nzanga maoko-pamusoro dambudziko solvers kuda dzinokosha nesayenzi uye vaida kuti nyika ive nzvimbo iri nani. nhasi, kuti mweya achiri kutungamirira sei isu kudzidzisa vadzidzi pamusoro kembasi uye sei isu kuumbwa itsva ruzivo kuti with kudzidzisa nyore mamiriyoni vadzidzi munyika yose-digital kudzidza.
mweya with kwakaita interdisciplinary ubanguranyika akaita dzakawedzerwa Zvinhu zvakawanda zvesayenzi uye rwokugadzira zvinhu. A mienzaniso mishoma: wokutanga makemikari kwetunhu kuti penicillin uye vhitamini A. Kukura radar uye pakusika inertial nhungamiro nehurongwa. Nokugadzirwa kwakaitwa rinobva makirisito ndangariro, izvo zvakaita kukura digitaalinen makombiyuta. Mipiro Major kuna Human Genome Project. Kuwanikwa quarks. Nokugadzirwa kwakaitwa electronic spreadsheet uye encryption hurongwa kuti hunoita e-zvokutengeserana. Pakasikwa GPS. Kupayona 3D kudhindwa. Pfungwa rakawedzera wezvose.
Current tsvakurudza uye dzidzo munzvimbo zvinosanganisira kudzidza digitaalinen; Nanotechnology; inogona kuenderera simba, zvakatipoteredza, Climate kwadzakabva, uye pasi pose mvura uye chikafu nokuchengeteka; Big Data, cybersecurity, robotics, uye chakagadzirwa njere; utano hwevanhu, kusanganisira kenza, HIV, autism, cheAlzheimer, uye dyslexia; zvoutachiona engineering CRISPR rwokugadzira; urombo alleviation; yemhando mukugadzira; uye utsanzi uye Entrepreneurship.
With kwakaita zvazvinoita kunosanganisirawo basa alumni redu. Imwe nzira with kudzidza kudzinga mberi nokutanga makambani kuti anunure pfungwa itsva kunyika. Imwe ongororo ichangobva kuitwa rinofungidzira kuti ave 2014, mupenyu with alumni vakatanga kupfuura 30,000 zvinoshingaira makambani, kusika 4.6 miriyoni mabasa generating nehasha $1.9 matiririyoni ari pagore kwemari. Kuendeswa pamwe chete, ichi “WITH rudzi” kwakafanana rechi10 pakukura upfumi munyika!
School of Architecture uye Planning
School of Humanities, Arts, uye Social Sciences
Sloan Chikoro Management
mu 1859, panyaya yakanga yakwidzwa kuna Massachusetts General Court kushandisa vachangobva vakazadza nyika Back Bay, Boston kwenguva “Conservatory of Art uye Science”, asi pfungwa vakakundikana. A bumbiro nokuti kukumbanidzwa pakati Massachusetts Institute of Technology, wakatangwa na William Barton Rogers, wacho wakasainwa mubati Massachusetts on April 10, 1861.
Mazuva maviri mushure bumbiro wakabudiswa, hondo yokutanga Civil War payakatanga. Mushure kunonoka refu kuburikidza mumakore ehondo, makirasi okutanga with kwakaita yaiitirwa Mercantile Building muBoston muna 1865. The institute idzva rakaumbwa sezvo chikamu Morrill Land-Grant Colleges Act kuti mari kumasangano “kusimudzira akarurama uye anobatsira dzidzo maindasitiri nemakirasi”, uye aiva chikoro nyika-Grant. mu 1863 pasi chimwe, ari Commonwealth pamusoro Massachusetts akavamba Massachusetts Agricultural College, raikura sezvo University of Massachusetts Amherst. mu 1866, yacho kubva kunyika rokutengesa vakaenda vakananga zvivako zvitsva muna Back Bay.
With akanga kurongwa kunzi “Boston Tech”. The akatanga kushandisa reEuropean polytechnic yunivhesiti womuenzaniso uye akasimbisa rabhoritari murayiridzo kubva mangwanani musi. Pasinei nezvinetso zvemari chisingaperi, Institute akaona kukura okupedzisira maviri emakore remakore rechi19 pasi President Francis Amasa Walker. Zvirongwa mune magetsi, mushonga, Marine, uye utsanana ouinjiniya vakanga vawedzera, Zvivako zvitsva dzakavakwa, uye kukura kwomuviri mudzidzi yakawedzera vanopfuura chiuru.
Kosi yacho Akakukurwa kuti yekosi kumikidzo, nezvishoma Kusimbisa yokungotaura nesayenzi. The chikoro ichangotangwa vachiri aitambura nekuora nokushomeka zvemari izvo akatsausa pfungwa with utungamiri. munguva iyi “Boston Tech” makore, With fakaroti uye alumni rebuffedHarvard University mutungamiri (uye aimbova with fakaroti) Charles W. Eliot inotaurwa yataurwazve kuedza kubatanidza with pamwe wepaHarvard College kwakaita Lawrence Scientific School. Paizova kanenge matanhatu kuedza kupinza with kupinda Harvard. In yayo wakatetepa Back Bay nzvimbo, With tisingakwanisi richikura zvivako ayo rakawandisa, kutyaira wakaora kutsvaka itsva kembasi uye mari. Pakupedzisira with Corporation mvumo munhu chibvumirano kubatanidza pamwe Harvard, pamusoro inopisa inopikisa ose with fakaroti, vadzidzi, uye alumni. zvisinei, munhu 1917 kwezvaizosarudzwa naIye Massachusetts Supreme Pakutonga Court zvinobudirira hwogumisa kwemapazi vanoronga.
mu 1916, ari with Hurumende uye with bumbiro akayambuka Charles River pamusoro dzokuzvinatsa chikepe Bsntur akavaka nokuti chiitiko, ichimirira with kuti chipe yakafarikana itsva kembasi kunyanya zvinosanganisira akazadza nyika iri maira-refu turakiti achitevedza Cambridge divi Charles River. The neoclassical “New Technology” kembasi yakanga yakagadzirwa raWilliam W. Bosworth uye akanga mari zvikurukuru kupfurikidza kusazivikanwa mipiro inoshamisa “Mr. Smith”, kutangira 1912. In January 1920, nomupi chakaziviswa kuva industrialist George Eastman pamusoro Rochester, New York, vakanga yakagadzirwa nzira firimu kugadzirwa uye kugadzira, uye akavaka Eastman Kodak. pakati 1912 uye 1920, Eastman vakapa $20 miriyoni ($236.2 mamiriyoni 2015 madhora) mune mari uye Kodak Nehunde kuna with.
With akachengeta vachifambirana uye vakabatsira mberi digitaalinen zera. Kuwedzera Pakukurukura vamutangira kuti ano kadambari uye network michina, vadzidzi, tsvimbo, uye fakaroti nhengo pa Project Mac, hazvizivi Intelligence Laboratory, uye Tech Model Railroad Club akanyora dzimwe dzokutanga vatambi kombiyuta yevhidhiyo akafanana Spacewar! uye akasika zvakawanda ano Hacker akariposhera uye tsika nemagariro. Several zvikuru Masangano kombiyuta-chokuita kunge yakatanga with kubvira 1980s: Richard Stallman raMwari GNU Project uye nekutambira Free Software Foundation vakanga nheyo nepakati 1980s panguva AI Lab; ari with Media Lab rakaumbwa 1985 Nicholas Negroponte uye Jerome Wiesner kusimudzira kuongorora pevara itsva zvigadzirwa kombiyuta; World Wide Web Consortiumstandards sangano rakaumbwa panguva Laboratory nokuda Computer Science mu 1994 kubudikidza Tim Berners-Lee; ari OpenCourseWare chirongwa akaita kosi zvokuvakisa pamusoro 2,000 With makirasi rinowanikwa paIndaneti pachena kubva 2002; uye Iye Laptop paminiti Child danho chokuwedzera dzidzo kombiyuta uye connectivity vana munyika kwakatangwa muna 2005.
With akanzi gungwa-Grant kukoreji 1976 kutsigira zvirongwa yaro oceanography uye zvomumvura sayenzi uye ainzi chinhambwe-Grant kukoreji 1989 kutsigira aeronautics ayo uye astronautics zvirongwa. Pasinei kupera hurumende mari mumakore kota remakore, With vatanga akawanda pakukura danidziro kuti yekudyidzana kuwedzera ritenderane: itsva dormitories uye mitambo zvivako kumavirira kembasi; ari Tang Center kuti Management Education; zvivako zvinoverengeka zviri kukona yokuchamhembe kwakadziva kembasi kutsigira kuongorora zvipenyu, uropi zvishande sayenzi, Genomics, hwokushandura zvinhu zvipenyu, uye tsvakurudzo kenza; uye nhamba itsva “backlot” Zvivako musi Vassar Street kusanganisira Stata Center. Construction pamusoro kembasi ari 2000s yaisanganisira expansions of Media Lab, ari Sloan School raMwari okumabvazuva kembasi, uye akapedza dzokugara dziri kumavirira. mu 2006, President Hockfield yakatanga ari with Energy Research Council kuongorora interdisciplinary matambudziko wakabvunzwa nokuwedzera yose simba rakawanda.
mu 2001, rakafuridzirwa rakavhurika kunobva uye pakachena kuwana masangano, With vatanga OpenCourseWare kuti hurukuro manotsi, dambudziko rinovira, syllabuses, bvunzo, uye hurukuro kubva ruzhinji huru yemazuva ayo rinowanikwa paIndaneti pasina muripo, kunyange pasina chinhu chakarongwa accreditation kuti kosi rakapera. Nepo mari yokutsigira uye nemitambo chirongwa zvakakwirira, OCW rakatsaurirwa muna 2005 mimwe mumayunivhesiti sezvo chikamu OpenCourseWare rakapiwa, izvo pari zvinosanganisira zvinopfuura 250 zvedzidzo masangano pamwe kugutsikana mumitauro dzinenge nhanhatu. mu 2011, With yakazivisa kuti zvaizova kupa rongeka advertising (asi kwete Credits kana madhigirii) paIndaneti vechikamu kupedza kosi racho “Mitxeu” chirongwa, nokuti mwero muripo. The “edX” paIndaneti kuchikuva kutsigira MITx pakutanga yakatanga vaishanda pamwe Harvard yaro zvineringanidzo “Harvardx” danho rekutanga. The courseware kuchikuva yakazarukira mabviro, uye nezvimwe mumayunivhesiti nechekare akabatana uye akawedzera yavo kosi kugutsikana.
Mazuva matatu mushure Boston Marathon kubhomba Kubvumbi 2013, With Police patrol mukuru Sean Collier akanga zvokufa kupfurwa yevaifungidzirwa Dzhokhar uye Tamerlan Tsarnaev, kuisa kubvisa zvechisimba manhunt kuti dzima ritenderane uye rakawanda Boston yemo nzvimbo zuva. vhiki imwe gare gare, yemariro Collier yakanga wakapindwa zvinopfuura 10,000 vanhu, ari mhemberero maiva ne with vemunharaunda vane zviuru mapurisa kubva New England nharaunda uye Canada. On November 25, 2013, With akazivisa pakusikwa Collier menduru, kuti paakavapa gore negore kuti “munhu kana boka rinosanganisa chimiro uye unhu Officer Collier akaratidza sezvo nhengo with munharaunda zvose zvatinoita hwake”. The chiziviso rakawedzerazve kuti “Future vanowana award vanosanganisira vaya vane zvipo kusapfuudza miganhu basa ravo, avo vakabatsira pakuvaka mabhiriji mhiri munharaunda, uye vaya kuramba zvaaigona kuita mabasa omutsa”
Unoda kurukura Massachusetts Institute of Technology ? chero mubvunzo, Mashoko kana wongororo
Massachusetts Institute of Technology musi Map
Photos: Massachusetts Institute of Technology pamutemo Facebook
Massachusetts Institute of Technology wongororo
Join kukurukura pamusoro Massachusetts Institute of Technology.